Celery | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ojiji na ojiji nke celery, uru na nsogbu
Taa, ọ dịghị nri, na-enweghị obere, zuru ezu n'enweghị celery. Nri akwukwo nri a nwere otutu nri ndi na edozi ahu ma nyere aka n'ile otutu oria. Ka anyị hụ ihe celery dị mma na otu kachasị mma iji mee ihe na nri gị. Ihe omimi nke celery Ihe mejuputara na akwukwo nri di iche iche na ndi na-edozi, umu anumanu na ndi ozo bu ndi vitamin, mineral na fiber.
Ihe bara uru na otu esi eri mgbọrọgwụ celery
Celery na-ebuli elu n'etiti ebe nri kachasị mma. Ọbụna n'oge ochie a jiri ya mee ihe dị ka ihe na-enye ọgwụ. Na oge anyị, a maara ihe oriri mgbọrọgwụ ọ bụghị nanị dị ka ụzọ ọgwụgwọ ọdịnala, kamakwa dị ka akụkụ dị ụtọ na nke bara uru nke nri nri kwa ụbọchị. Mgbọrọgwụ Celery Nkpọrọgwụ celery bụ biennial oyi-eguzogide osisi esịnede ndị nche anwụ ezinụlọ.
Uru nke celery maka ụmụ nwoke
A na-eji oge celery a maara nke ọma na akwukwo nri (akwukwo, mkpuru osisi na mgbọrọgwụ) emeghi ka ekpori uto ma me ka uto ocha di nma, kamakwa ndi mmadu na omenala di iche iche, nke a bu ihe eji eme ka nwoke na nwanyi nwee mmekorita. Ihe edere ga-akọ maka ihe ndị na-agwọ ọrịa na otu esi eji ihe oriri a magburu onwe ya.
Akụkụ nke ịkụ mkpụrụ nke celery na ilekọta ya n'ọhịa
Ndị mmadụ nwere ekele maka ísì ụtọ na ụtọ àgwà celery ọ bụghị ogologo oge gara aga: a na-eji osisi a eme ihe na nri maka ọtụtụ narị afọ, ọ bụ ezie na edere ya na oge ochie n'oge Grik oge ochie; n'oge gara aga, a na-eji ya eme ihe dị ka ọgwụ. N'oge a, ọtụtụ ndị na-akwado nri ahụike na ezi ahụike na-arụ ọrụ na-etolite celery na atụmatụ nzuzo.
Akụkụ nke iji celery na pancreatitis
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi nwere nnukwu nri nke ahụ chọrọ. Na-eme nri, ọ dị mkpa iburu n'uche ọnọdụ ahụ ike, n'ihi na, n'agbanyeghị vitamin bara ọgaranya, ọtụtụ ngwaahịa na-emegiderịta onwe ha na ọrịa ụfọdụ. Ihe omimi na ihe caloric nke ngwaahịa Na-eri ma ahihia akwukwo ndu nke celery, nke nwere: vitamin: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K; macro- na microelements: boron, calcium, chlorine, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, selenium, sulfur, zinc.
Atụmatụ nke ịgha mkpụrụ ma na-elekọta mgbọrọgwụ celery na oghe ala
Ebe mgbọrọgwụ Celery na-ezo aka na osisi na ogologo oge na-eto eto. Akụkụ a na-emekarị ka ndị na-arụ ọrụ ugbo, ma n'omume, ọ bụghị ihe siri ike na-eto eto na celery mgbe a na-ahụ maka ụfọdụ ọrụ ugbo. Na peculiarities nke na-akọ ihe, yana iwu ndị bụ isi maka nlekọta nke celery, gụọ n'okpuru ebe a.
Kedu ihe nchịkọta ọgwụ nke lemon, mmanụ aṅụ na celery
Ọgwụ mmụta ọdịnala maara ọtụtụ ụdị ọgwụ dị iche iche nke dị mma maka ahụ. Ha nwere ike iji nwayọọ na-emetụta ebe nsogbu ahụ na-enweghị mmebi ọ bụla ma ọ bụ ihe ọjọọ ndị ọzọ. Otu n'ime ihe ndị kasị achọ na ihe bara uru maka ahụike bụ ngwakọta nke lemon, mmanụ aṅụ na celery.
Akụkụ nke ịkụ mkpụrụ nke celery sitere na mkpụrụ n'ụlọ
Nri celery dị ụtọ bụ ihe oriri a chọrọ na ubi ọ bụla. Iji mee ka ihe ubi a buru ibu, onye kwesiri igbanwe ihe di iche iche ma gbasoo aro ndi a ekwuru n'okpuru. Ihe omume nke osisi na iche Celery bụ nke ọdịnala ọma nke nche anwụ ezinụlọ. Ihe ndị e ji mara ya bụ: osisi dị elu ruo 1 m na nnukwu rosette leafy; epupụta na-egbuke egbuke, na-egbukepụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-esi ísì ụtọ; a kụrụ ihe ọkụkụ n'afọ mbụ; tuber gburugburu ma ọ bụ akara nha; agba nke tuber bụ isi awọ ma ọ bụ acha ọcha-acha ọcha, pulp dị ọcha ma ọ bụ ude; blooms ma na-enye mkpụrụ mgbe re-akuku.
Uru na nsogbu nke celery maka ahụ mmadụ
Celery bụ otu n'ime ubi a na-akọkarị. Ọ bụkwa akụ dị oké ọnụ ahịa nke vitamin na ihe ndị na-achọpụta ihe. Enwere otutu ihe omuma banyere osisi, uru ya na ojiji ya n'isiokwu anyi. Nkọwa botanical Celery bụ otu osisi ma ọ bụ afọ abụọ nke ụlọ ndị nche anwụ.
N'ihi ịba ụba nke celery na-edozi ahụ bụ ezigbo adjuvant na ihe bụ isi nke ọgwụ gout. Ịmara ọmụmụ zuru ezu na njirimara pụrụ iche ya, ngwugwu na usoro ojiji ga-enyere gị aka na ọgwụgwọ na igbochi ọrịa a. Kedu ihe bụ gout? Nke a bụ ọnya nke nkwonkwo, kpatara ọrịa endocrine.
Akụkụ nke iji ihe ọṅụṅụ celery
Ọtụtụ ndị hụrụ Celery n'anya, osisi a nwere ike ime ka obi dị ụtọ ma na-esi ísì ụtọ, na ihe mgbọrọgwụ nke ọma. Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole maara banyere ihe ngwọta nke ihe ọṅụṅụ nke osisi a. Ọ nwere ike inwe mmetụta dị ike n'ahụ ahụ, yana ịkwado ahụike n'ọtụtụ pathologies. Isiokwu a ga-atụle uru ndị dị mkpa na mmerụ ihe ọṅụṅụ nke celery maka ahụike, yana kọwaa n'ụzọ zuru ezu ole ị nwere ike kwa ụbọchị na otu esi aṅụ mmanya na-agwọ ọrịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị.